Deegaanka - BBC News Somali
Dr Muna oo ka warrameysa faa'iidada geedka Yicibta
Geedka Yicibta ama Jicibta oo waxtarkiisa cilmiyan la xaqiijiyey dad iyo duunyo ayaa ka sii suulaya meelo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Dr Muna oo ka warrameysa faa'iidada geedka Yicibta
Fiidmeer fara ba'an ku heysa gobalka New South Wales
Mas'uuliyiinta gobalka New South Wales ee Australia, ayaa ku dhawaaqay xaalad deg-deg ah oo ay ku caawinayaan magaalo ay go'doomiyeen tobannaan kun oo kibilaay ah.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Fiidmeer fara ba'an ku heysa gobalka New South Wales
Canada: Dabka oo labo laabmi doono
Madaxda Canada, ayaa sheegay in dabka ka kacay agagaarka magaalada MacMurray uu labo laabmi doono 24ka saac ee soo socda.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Canada: Dabka oo labo laabmi doono
Heshiiska cimilada adduunka
Dalal gaaraya 170 ayaa lagu wadaa in ay galinka dambe ee maanta saxiixaan heshiis cusub oo lagula dagaalamayo isbadalka cimilada adduunka.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Heshiiska cimilada adduunka
Guryo ku burburay dab ka kacay Australia
In ka badan boqol guri, ayaa ku burburay dab xoog leh oo ka kacay keymaha gobolka Victoria ee Australia.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Guryo ku burburay dab ka kacay Australia
Heshiiska Paris oo la soo dhaweeyay
Shiinaha iyo Hindiya, ayaa soo dhaweeyay heshiiska isbeddelka cimilada ee lagu gaaray sabtigii Paris kaddib wadahadalo dheer.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Heshiiska Paris oo la soo dhaweeyay
Heshiis laga gaaray isbedelka cimilada dunida
Heshiis wax looga qabanaayo isbedelka hawada dunida ayaa waxaa isku raacay ku dhowaad 200 oo dal oo ku kulan sanaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Heshiis laga gaaray isbedelka cimilada dunida
Heshiis laga gaaray isbedelka cimilada
Faransiiska oo martigelinaya wada hadalka isbeddelka cimilada ee ka dhacaya Paris ayaa sheegay in qorshaha heshiiska la soo bandhigay haddii la hirgeliyo uu hoos u dhigi doono kuleylka cimilada adduunka.
12 Disembar 2015
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Heshiis laga gaaray isbedelka cimilada
Heshiis laga gaarayo isbedelka cimilada
Kooxaha wadahadallada ay uga socdaan magaalada paris ee dalka faransiiska eek a arrinsanaaya isbedelka cimilada waxa ay u muuqdaan inay ku dhow yihiin heshiis inay gaaraan ka dib isbuuco shirar adag ah.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Heshiis laga gaarayo isbedelka cimilada
Shirka isbedelka cimilada ee Paris
Dhinacyada wada xaajoodka ee shirka caalamiga ah ee isbeddelka cimilada ee ka socda magaalada Paris, ayaa soo gudbiyay qorshe heshiis lagu doonayo
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Shirka isbedelka cimilada ee Paris